Igama lengwe (i-Panthera Pardus) lisuselwa emagameni esiGreki okusho ukuthi ibhubesi ne-panther, ngenxa yenkolelo yangaphambili yokuthi izingwe zaziyingqikithi phakathi kwengonyama ne-panther. Ingwe ichazwa njengenye yezinto ezingenakuqhathaniswa kwezinto ezinkulu zokugcoba.
Ingwe yaseAfrika ihluka ngobukhulu nombala kuye ngokuthi indawo yayo nendawo yokuhlala. Ngokusho kwe-South African National Biodiversity Institute (SANBI), imibala yayo isukela ephuzi elimhlophe kuze kube segolide elijulile noma elincane, ngokuhlukahluka okumnyama nokusiketshezi okubangelwa izakhi zofuzo ezizenzekelayo ze-autosomal.
Amalwe aseCape avela ezindaweni ezisentabeni ezisentshonalanga eNtshonalanga Kapa mancane kakhulu kunezingwe ezitholakala kulo lonke izwe, namadoda ayesisindo esingama-31 kg nabesifazane abangaba ngu-21 kg. Amadoda aseKruger National Park, ngokungafani nawo, angaba nesisindo esingama-58 kg, kuyilapho abesifazane besisindo esingama-37,5 kg.
Naphezu kwalokhu, uhla lwasekhaya lwe-lengwe laseKapa lukhulu ngenxa yokutholakala okuncane kokudla, okuphakathi kuka-200 km² no-1 000 km², uma kuqhathaniswa nalabo abaseKruger National Park, ephakathi kuka-25 km² ukuya 50 km².
Lapho ama-cheetah anezindawo ezithile, izingwebe zinamacenge amabala abizwa ngokuthi ama-rosette emizimbeni yazo kanye namabala amnyama emilenzeni, ikhanda, izinhlangothi kanye ne-hindquarters. Zibonakala kakhulu futhi zingenayo imigqa emnyama ebusweni.
Ngokuvamile bakhetha ama-koppies nezinkuni zase-riparian futhi bagweme utshani. Ngokusho kwe-SANBI, ama-koppies avame ukukhethwa njengama sites for amancane cubs kanye amaphuzu amaphuzu lapho ukuthola khona inyamazane. Ngenkathi izingwe zivuthwa ngokocansi ezivela ezinyangeni ezingu-24, zivame ukuzala kuphela kusukela eminyakeni emithathu ubudala. Amakhilomitha amabili kuya kwamathathu azalwa ngamalitha, emva kwesikhathi sokubeletha cishe izinsuku ezingu-100.
Ama-cubs azalwa futhi afihliwe ezindaweni eziluhlaza. Bangabantu abasengozini kakhulu phakathi nonyaka wokuqala wokuphila kwabo, ikakhulukazi uma behlala endaweni lapho ukudla kuntula khona. Ngokusho kwe-SANBI, i-cub mortalities iphakathi kuka-35% no-90% kuye ngokuthi indawo yokuhlala. Abesifazane bakhulisa amathole abo ngaphandle kosizo. Ngokuvamile ama-cubs ashiya unina uma eneminyaka eyi-15 ubudala.
Isibonelo Ingwe ngokuyinhloko izidalwa zasebusuku, kodwa ingase isebenze ekuseni amahora ekuseni lapho ingaphazamiseki. Ukudla kwabo kuhlanganisa izinambuzane ezincane kuya ezilwaneni ezincelisayo kanye nezinye izidumbu, kepha ngokuvamile zikhetha inyamazane engamakhilogremu ayi-10 kuya ku-40 kg. Izinombolo zeCaracal kanye namajack ngokuvamile zihla ezindaweni lapho kufanele zincintisane nengwe yokudla. Ngokombiko we-Predation Management, ingwe ngokuvamile idla kuphela emfuyweni ezindaweni lapho kunezinye izindlela ezingekho.
Baziwa ukubulala okungaphezu kwalokho abakudinga, kodwa kuphela ukondla isidumbu esisodwa ngesikhathi. Zisindayo futhi zinamandla kunama-cheetah, ngakho-ke ungaxoshe inyamazane yazo kodwa ugobe futhi uhlasele kuwo. Isidumbu sithinteka ngokuluma entanyeni noma emphinjeni bese uhudulwa kude lapho kungadliwa khona ngokuphepha, isibonelo, ngaphansi kwesihlahla esikhulu, phakathi kwamadwala noma phezulu esihlahleni. Hudulela amamaki lapho ukuphangwa kuthathwe khona, ngakho-ke, kuyobonakala.
Amakhwala angabonwa angabonakala nasezinhlathini noma emahlombe esitokisini esikhulu, kodwa intamo yezilwane ezincane zingase ziphulwe. Ngokombiko wePredation Management, uboya obuningi bunqunywa, ingwe ngokuvamile idla ngaphakathi ngaphakathi kwemilenze yangemuva futhi idle 1 kg kuya ku-2 kg yenyama. Ngokuvamile abakususi amathumbu.
Izingwe yizinhlobo ezivikelwe futhi eNtshonalanga Koloni, izikhulu zokongiwa kuphela ezivunyelwe ukusetha izicupho. Kwezinye izifundazwe, abalimi bangafaka isicelo semvume yokubeka izicupho zezinyosi futhi kufanele baxhumane neziphathimandla zabo zokulondolozwa kwemvelo ukuba bathuthele izingwe, lapho bebanjwe. Ama-sheepdogs nezimbongolo ze-Anatolian ziye zaphumelela ekusizeni ukuvimbela ingwe ngaphambili, kepha izinja nezimbongolo kudingeka zikhuliswe nemfuyo ukuze zibe abavikeli abaphumelelayo. Ucingo kanye nokwehliswa kwemfuyo kuzosiza.